Ifulethi lami lisendaweni ekahle endaweni ethule nehlala abantu, ibangana nje ukusuka emigwaqweni emincane nezikwele zesikhungo somlando saseVerona. Lapha uzojabulela ukuhlala ngokuthula kude nesiphithiphithi sendawo yezivakashi yedolobha.
Ifulethi, elilungele umbhangqwana noma umhambi oyedwa, linomklamo omncane futhi liqukethe igumbi lokuhlala eline-TV netafula lokudlela, ikhishi elinefriji nomshini wokuwasha, kanye negumbi lokulala eliphindwe kabili nendawo yokugezela. Ngezinyanga ezishisayo zasehlobo, ungahlala upholile nge-air conditioning. Isevisi ye-Wi-Fi yamahhala ifakiwe.
Kusuka emafasiteleni efulethini kunombono omuhle weTorricelle (amagquma azungeze iVerona).
Itholakala esakhiweni sekhulu le-16 esine-loggia esitezi esiphezulu, esiveza okuthile mayelana nesikhathi saso esidlule: lesi sakhiwo sasisetshenziswa njengombhoshongo wokubuka endaweni yesiqhingi somfula futhi sibheke ukuhamba komfula eduze kwe-Adige, inhliziyo ye-Adige. ukuphila e-Verona yasendulo.Ifulethi lami lokuziphekela elingu-30 sq m liyindawo ekahle yombhangqwana ofuna iholide lokuphumula edolobheni lami elihle.
4.96 ·238 okushiwo abanye
Ifulethi lisendaweni yakudala ebizwa ngokuthi iVeronetta, phansi kweCastel San Pietro, osebeni lwesobunxele lomfula i-Adige.
Ngihlala futhi ngisebenza esakhiweni esifanayo, ngakho-ke ngitholakala nganoma yini ongase uyidinge ngesikhathi uhlala.
Inombolo yepholisi: M0230913524